Global Voices teny Malagasy » Vehivavy eo amin’ny fandikan-teny, fifanarahanasa sy ny sisa maro! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Jona 2019 18:28 GMT 1	 · Mpanoratra Marianna Breytman Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Raha ny fahalalako azy, dia toa Volan'ny Vehivavy eo amin'ny Fandikan-teny ny volana Aogositra! Fantatro fa efa faha-22 ny volana izao, saingy mbola manana fotoana hankalazana izany isika! Jereo ity lisitra  avy amin'ny Teny mihoatra Sisintany ahitana ireo mpanoratra vehivavy 31 manerana izao tontolo izao ity ary raha manana torolàlana tianao zaraina ianao, dia afaka mandefa izany amin'ny tenirohy #WITmonth!
Ny fandikana sy ny fanomezana dikantsoratra dia samy ampiasaina eo amin'ny indostrian'ny sarimihetsika mba handikana ny votoatin'ny horonam-peo sy sary. Saingy tsara kokoa noho ny iray hafa ve ny dingana iray? Inona no very amin'ny fandikana eo amin'izy roa? TraductaNet namaly ireo fanontaniana ireo ary maro kokoa ao anatin'ity lahatsoratra mahafinaritra ity . Toa hita fa any amin'ny firenena sasany, aleo mampiasa ny fomba iray ary ilaina amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fomba tsara indrindra handikana izany ihany koa ny karazana votoaty. Vakio raha liana momba ny fiasan'io dingana io!
Raha sambany mamaky ity gazety ity ianao ary te hiaraka amin'ny Global Voices, dia lazao anay bebe kokoa eto ny momba anao !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/17/140208/
 ity lisitra: http://www.wordswithoutborders.org/dispatches/article/where-are-the-women-in-translation-here-are-31-to-read-now-liz-cettina
 ato : http://hooddanelle.wix.com/globalvoices#!blog/mu6es
 ato : https://www.tm-town.com/translation-jobs-contract-advice-ebook
 anatin'ity lahatsoratra mahafinaritra ity: http://www.traductanet.com/blog/subtitling-vs-dubbing-is-language-lost-in-translation